B2B: Vidio na-emetụta Mkpebi chazụta | Martech Zone
Enweela vidiyo dị ntakịrị site na ịre ahịa ndị ahịa, mana ezigbo ohere nwere ike ịbụ azụmaahịa azụmaahịa (B2B). N'ime nyocha nke Eccolo Media wepụtara n'oge na-adịbeghị anya, igwe okwu mgbasa ozi kachasị ndepụta dị ka ndị na-eme ngwa ngwa na ndị na-eme mkpebi na ndị na-emetụta ya na-eji eme mkpebi ịzụta.
Dị ka anyị hụrụ na nyocha ọ bụla gara aga, ụdị nke nnochi anya kachasị ewepu bụ broshuọ ngwaahịa & mpempe akwụkwọ data. N'ezie, ndị zaghachirinụ emeela naanị ụdị ụdị ọdịnaya a karịa afọ: site na 70 pasent na 2008; ruo 78 percent na 2009; ruo nchọpụta afọ a nke pasent 83. Ihe omumu banyere akwukwo na akwukwo ocha, mgbe ha gbasiri onu ogugu na onu oriri n'etiti 2008 na 2009, noro obere n'etiti 2009 na 2010. Mgbanwe kasịnụ di na oge ndi nzaghachi riri vidiyo na pọdkastị & faịlụ ọdịyo. Na 2008, ọ bụ naanị pasent 28 nke ndị zaghachiri riri ụdị ụlọ ọrụ a. Na 2009, pọdkastị nwetara oke uru ruo pesenti 32. Oriri vidiyo rịrị elu karịa site na 28 pasent na 2008 ruo 51 pasent na 2009.
Ogo dị elu, ọnụ ala mmepụta vidiyo na nnabata odi ka obu onye na agba otutu nkuchi. Nakwa, bandwidth dị elu na nhọrọ dị elu nke ngwaọrụ na ngwaọrụ iji lelee vidiyo emeela ka ọtụtụ ndị isi nwee isi. Vidio na-aghọ atụmatụ dị oke mkpa. Ọ bụrụ na ịnabataghị ya, ị kwesịrị ịdị na-etinye atụmatụ ugbu a… nyocha ahụ na-enye ihe akaebe na vidiyo na-aghọ ihe dị mkpa n'ime ngwa agha gị.
Enwere ọtụtụ ozi na B2B Survey Report a n'efu - ọkachasị na njikọ ọnụ na mmetụta kachasị elu: Whitepapers. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-enye nghọta miri emi banyere ihe na-eme ka akwụkwọ ọcha dị ukwuu na ihe na-eme ka ha daa, yana oke ụlọ ọrụ ha na-adọta.
Tags: ile ọbịajames bond ngwaahịa pụrụ isi chọtajiveMari Smithkpaliri emailvideo nkataWriting